ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) နှင့် ကျောင်းသားတပ်မတော် မြောက်ပိုင်း (ABSDF-N) တို့၏ လဂျားယန်ဒေသ ပူးတွဲ ခုခံတော်လှန်စစ် ရုပ်သံမှတ်တမ်း (၁၄-၁၂-၂၀၁၂)
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) နှင့် ကျောင်းသားတပ်မတော် မြောက်ပိုင်း (ABSDF-N) တို့၏ လဂျားယန်ဒေသ ပူးတွဲ ခုခံတော်လှန်စစ် ရုပ်သံမှတ်တမ်း (၁၄-၁၂-၂၀၁၂)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 6:26 PM
လွဏ်းဆွေ တ ယောက် ဘယ်ရောက် နေ
ဘီအီး ဆိုင် ကို ရောက် နေ
ဘီအီးဆိုင် က နေ ဘယ်လိုပြန်
ပုဆိုး ကွင်းသိုင်းပြီး ပြန်
မြန်မာနိုင် ငံမှာမွှေမြန်မာမှကြီး မြန်မှာစိတ်မရှိတဲ့ကောင် မင်းဘယ်တော့မှ မြန်မာလို့မ ပြောနဲ့
ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်တော့absdf နဲ့ kia ဆိုတာငပေါတွေမှန်း
လူလေးမောင်လွဏ်းဆွေ ရွှေတိဂုံဘုရား လဒ နားမွတ်ကု
လားများစွာသေလတ္တံ့ ဆိုတဲ့တဘောင်ပေါ်နေတော့ မွတ်
လိုင်ဇာ ကို တပ်မတော်မှ အပြီးသိမ်းပိုက်သင့်သည်။
Hey Myo Chit,
What do you talk like that?This video file is just KIA and ABSDF.You don't know about your original Bamar.
Burmese (Indian) Kalarr
Kan Yar Zar Karajar
Yar Za Htar Ni Rajasthani
Nga Ya Man Kann Yaman Khan
Anawyahtar(Mahar Yarza Maharaja Sri
Thiri Aniruddha Dewa) Aniruddha Dewa
Yar Za Ku Mar Ya Rajakumar
Pyinsa Kalayarni Pin Sara Kalyani
Phayarr is not Burmese language.It's Indian language.The original of Indian language is Puraa.Pasoe is from India and Tike pon is from China.So, Kalarr is your Lord and Master.Don't say like that next time.Ok!Shameful?
Hello lwin,how are you?I don't against lower standard man.
KIA/KIO did strengthen military force during cease fire since 1996 by Bo Khin Nyunt and KIA.
Now they shunt many times to the peace talk, are being more greedy and lack of Union spirit.
ပိုလို့ ပင်ညံ့ ဖျင်းပါသည်။
နယ်ချဲ့ လက်အောက်မှ မလွှတ်မြောက်သေးပဲ..
ရန်ကုန်မှ သီဟတင်စိုး မိသားစုရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
မှ တော်လှန်ရေးဇာတ်ထုတ်များကိုလဲ အရင်လေ့လာသင့်ပါသည်။
ဇာတ်ဝင်ခန်း အချိတ်အဆက် များလဲ
မောင်မင်းကြီးသား တိုက်ပွဲဝင်တစ်ယောက်၏ ပစ်မှတ်ကိုချိန်၊
အဆုးံမတော့...ဆေးပေါ့ လိပ် ဖွာပြသည့်
ပြကွက်မှာ...ဘာ မက်ဆေ့ ကို ပေးချင်မှန်းလဲမသိပါ။
ဘိန်း ရှုရင်းလဲ တိုက်တယ်..ဟု ပြောချင်ပုံရ၏။
အမိန့် ပေးသူ၏ ပုံမပါပဲ၊
ကင်မရာထမ်းပြီးရိုက်ရင်း ပါးစပ်က လိုက်ပြောနေသည်မှာ အလွန်ဆိုးရွားလှသည်။
စုပုံ နေခိုင်းပြီး ပစ်ပြသည့် ပြကွက်မှာလဲ
(ဟိုဖက်ကို ကြည့်၊ ဒီဖက်မပစ်နဲ့ )တဲ့..။
မှန်ဘီလူးထဲ ကျည်ဝင်လာမည်ကိုလဲ စိုးရိမ်လိုက်သေးသည်။
DKBA မှာ ရုပ်သံ ဒါရိုက်တာ၊ကင်မရာမင်း
အသံဖမ်းဆရာတို့ ထက်ပင် ညံ့ သည်ကို
တွေ့ ရလေ၏။ ။
အော်- သနားစရာလူတွေပါလား- ကေအိုင်အေ ကို အပြတ်ခြေမှုန်းတဲ့- အခြေစိုက်စခန်း ကျဆုံးယုံမျှနဲ့ တိုင်းရင်းသား ကိစ္စ နိဂုံးချုပ်ပြီလို့ ယူဆလျှင် မှားပေလိမ့်မည်။ တွေ့ ဆုံးဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာမှသာ ပြေလည်ပေမည်။ လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီး ဖြေရှင်းခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ပြီ- ဘယ်မှာငြိမ်းချမ်းခဲ့လဲ- လက်နက် အသာ လူအင်အားအသာနဲ့ဖိနှိပ်လို့ သာရချင် ရမယ်- ငြိမ်းချမ်းရေးတော့ ဘယ်တော့မှ ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီထဲမှာ KIA တကောင်မှ မပါဘူး.... ABSDF က စောက်ရူးတွေကြီးပဲ
ငြိမ်းချမ်းရေးတော့ ဖြစ်စေချင်တယ် ။ကချင်က သွေးနီ
တယ် ။ ဗမာကလဲ သွေးကြောင် တဲ့ ကောင်နဲမယ်
လို့ ယူဆပါတယ် ။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ။ စစ်ပွဲကြာလျင်
တရုတ်က နှစ်ဘက် ကစားပြီး ကချင်သစ်တောတွေ
အမျီုးသမီးတွေ ယူ, လက်နက် တွေ ဈေးကြီးကြီး
ရောင်း, တဆုံး ဇိမ်ခံပြီး နောက်ကွယ်က ဟားတိုက်နေမှာ ။
စစ်ကို စစ်နဲ့ရပ်ခဲ့တာ မကြားဖူးဘူးလား လေ့လာပါဦး သီရိလင်္ကာတောင် အေးချမ်းနေပြီ
မြန်မာနဲ့ သီရိလင်္ကာ မတူဘူးကွ စောက်ရူးရ ။ ဟိုက တမီးကျား တပုန်ပဲရှိတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တွေ ရာနဲ့ချီရှိတဲ့ မင်းအဲဒါသိလာ။
သီရိလင်္ကာက က္ဈန်းနိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမှာက ဟိုး
အရင် တရုတ်ဖြူ စစ်ဆင်ရေး ကထဲက တရုတ်ဖြူတွေ
စစ်ရှုံးလျင် ယိုးဒယားဘက် ခဏလေး ပြေးလိုက်တာနဲ့
လွတ်သွား လေ့ ရှိတယ် ။ သူပုန်တွေက စစ်ရှုံးလျင်
ဘယ်တော့မှ ပြန်ခံမတိုက်ဘဲ ပျောက်ကျားစစ်တို့
ရေရှည်တိုက်ပွဲတို့ အကြောင်းပြပြီး အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ
တွေထဲ ထွက်ပြေးလေ့ ရှိပါတယ် ။ တနည်းအားဖြင့်
ပြောရလျင် သတ္တိကြောင်တယ် လို့ လည်း ပြောလို့ရပါတယ် ။
ABSDF ဆိုတဲ့ ကိုယ့်အချင်းချင်းတောင်မချန် ဇာတ်တူသားစားတဲ့ ကောင်တွေက KIA ရဲ့အောက်ဆွဲ၊ KIA က တယုတ်ရဲ့အောက်ဆွဲ၊ စဉ်းစားသာကြည့်ကြပေတော့။
ကျုပ်လည်း ကြံဖွတ်အစိုးရ သိပ်ကြိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်တွေက ကြံ့ဖွတ်ထက်ပိုဆိုးမဲ့ပုံရှိတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတွေထဲမှာ ABSDF က အညံ့ဖျင်းဆုံးပါပဲ။ စစ်ဆိုလဲ ဟုတ်တိပတ်တိတိုက်ဖူးတဲ့ ပုံမပေါ်ဘူး။ အခုလဲ မရှိတဲ့ ရန်သူကို ပစ်ပြီးစတိုင်ထုတ်နေကျတာများ မသိတာမှတ်လို့။
အပေါ်က ကိုunknow ပြောတာကိုတော့ လက်မခံပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ အားလုံးပေါင်းတဲ့ တပ်စုအင်အားတောင် စစ်တပ်ရဲ့ ၁၀ပုံပုံ တပုံ မရှိဘူးဗျ။ ဒီလို အနေအထားမှာ ဘယ်လိုများ မျက်နှာချင်းဆိုင် သူသေကိုသေ တိုက်ပွဲမျိုးကို ဆင်နွဲနိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ စစ်တပ်က ရှေ့တန်းထွက်နေတဲ့ စစ်သား ကြီးငယ်တွေဆိုတာကလဲ စစ်အရမ်းတိုက်ချင်လို့ တိုက်ရည်ခိုက်ရည်အရမ်းပြည့်ဝနေလို့ စစ်ထွက်တဲ့ လူတွေမဟုတ်ပါဘူး အပေါ်ကအမိန်းအာဏာနဲ့ သွားတိုက်ခိုင်းလို့သာ တခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ တပုန်ကို တခါးမှ မရောက်ဖူးတဲ့ တောကြီးထဲသွားတိုက်နေရတဲ့လူတွေကြီးပဲ။ ဘယ်လိုကဘယ်လို စစ်တပ်ထဲရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးစစ်သားတွေဆို အများကြီးမှ အများကြီး။ မြန်မာပြည်အနံ ကလေးစစ်သား တွေမတရားလိုက်စုဆောင်းနေတာများ ခင်ဗျားတို့လဲ ကြားဖူးမှာပေါ့။ သေရင် ဒီလို စစ်သားလေးတွေပဲ ရှေ့ဆုံးက သေပေးရတာ။ အမှန်တကယ် နိုင်ငံရေးကစားနေတဲ့ စစ်သားကြီးတွေ ချမ်းသားပြီးရင်းချမ်းသာနေတဲ့ ရာထူးကြီးကြီး စစ်သားကြီးတွေကတော့ ၀ါဒအမျိုးမျိုးဖြန့်လို့ မိန်းမနဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ ဇိမ်ခံကားကြီးတွေ တိုက်ကြီးတွေနဲ့ ငြိမ့်နေကျတာ ...အောက်က အလကားအသတ်သေခံပေးနေရတဲ့ စစ်သားလေးတွေ ဘက်က ပြည်သူတွေရပ်တည်ပေးဖို့ကောင်းပြီး။
skyredven us said...
ကေအိုင်အေ ကို ဗမာစစ်တက်အနေနဲ့ အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းသင့်တယ် ဒါမှ တိုင်းပြည်အေးချမ်းမှာပါ
kiaကိုချေမှုန်းမယ်လို့ပြောရအောင် kiaတွေကမင်းကိုဘာလုပ်လိုက်လို့လဲကြားစကားတွေကိုယုံ လေလှိုင်းကလွင့်တဲ့သတင်းမှားတွေနားထောင် kiaဆိုတာဘာကြီးလဲသိဖို့လိုနေပြီ။သိချင်ရင်kiaထဲ ဝင်ကြည့်လိုက်။
mon chit said...
နအဖ အားကိုးနေတဲ့ ကောင်တွေအကုန်လုံး စစ်ဘီလူး ခွေးဝဲစားတွေဘဲကွ မင်းတို့ကြိုက်သလောက်တိုက် ဘယ်တော့လက်နက် မချဘူးကွ ကမ္ဘာမြေမကျရှုံးသရွှေ့ နာလည်လား